प्रहरीको दुर्भाग्य : घटनापछि मात्र सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र दुरुस्त !
काठमाडौँ -राजधानीको सुकेधारा र घट्टेकुलोमा भएका दुई छुट्टाछुट्टै बम विष्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या ३ पुग्यो, घाइतेको संख्या ६ नाघेको छ । काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले दुवै विष्फोटमा नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' समूहको हात रहेको पुष्टि गरिसकेका छन् भने राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र दुरुस्त बनाएको दाबी गरेका छन् । उनको दाबीलाई पत्याउने हो भने नेपाल प्रहरी र सरकार मातहतका खुफिया एजेन्सीमाथि धेरै प्रश्न उठ्न सक्छ ।
सुकेधारा र घट्टेकुलो दुवै स्थानमा एक-एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने सुकेधारा विष्फोटमा घाइते भएका एकजनाको ओम अस्पतालमा मृत्यु भयो । प्रहरीले घटनास्थलबाट विप्लव समूहको पर्चा भेटेपछि प्रारम्भिक अनुसन्धान उतैतर्फ सोझ्यायो । घट्टेकुलोमा घाइते भएका रविन केसी विप्लव समूह निकट विद्यार्थी संगठनका नेता हुन् भने अर्का घाइते सुरेन्द्र महर्जन विप्लव समूह निकट नेवा मुक्ति मोर्चाका नेता रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले फेला पारेको छ ।
तर पछिल्लो समयमा सरकार र सुरक्षा निकायले विप्लव समूहलाई कम आँकेको जस्तो देखिएको छ ।
केही दिनअघि विप्लवले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना युवा संगठनका कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरेको हत्याको बदला लिने आशय व्यक्त गरेका थिए । सोही विज्ञप्तिमा जेठ १३ गते नेपाल बन्दको पनि घोषणा गरिएको थियो । साङ्गठनिक कामको सिलसिलामा हिँडिरहेको बेला गिरफ्तार गरी भिडन्तको नाममा प्रहरीले आफ्नो कार्यकर्ताको हत्या गरेको उनले आरोप लगाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट नै विप्लव समूहलाई प्रतिबन्धको घोषणा गरेको सरकारले दर्जनौं नेताहरूलाई धरपकड गरेको थियो । केही स्थानमा गोलीप्रहारसम्मका घटना भएका थिए । तर पछिल्लो समयमा सरकार र सुरक्षा निकायले विप्लव समूहलाई कम आँकेको जस्तो देखिएको छ । यही परिस्थितिको फाइदा उठाएर विप्लव समूहले विष्फोटका घटना घटाएको हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
१३ गते नेपाल बन्दको घोषणा गरेको विप्लव समूहले राजधानीकै दुई संवेदनशील स्थानमा अघिल्लो दिन बम विष्फोट गराउला या कुनै अन्य घटना गराउला भनेर सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग र अन्य खुफिया एजेन्सीहरूलाई कुनै संकेतसम्म प्राप्त नहुनु लज्जास्पद हो । यसअघि ललितपुरस्थित एनसेलको मुख्यालयमा बम विष्फोट गराएर एक जनाको ज्यान लिइसकेको इतिहास छ विप्लव समूहले ।
गत फागुन १० गते एनसेलको मुख्यालयमा भएको बम विष्फोटको जिम्मेवारी विप्लव समूहका एक नेता हेमन्तप्रकाश ओलीले लिएका थिए । अहिले उनी सोही आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । त्यसयता देशैभर सरकारले धरपकड गर्यो, दर्जनौंलाई समात्यो । उक्त समूहलाई प्रतिबन्ध लगायो तर आजको विष्फोटको घटनाले देशलाई झन् बढी आतंकित बनाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा तत्कालीन माओवादीले गरेको ६ दिने आमहड्तालका क्रममा काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूबाट लाठी बरामद गरेको थियो र त्यसलाई ठूलै प्रचार गरियो ।
राजधानीमै किन यसरी विष्फोट हुन्छ त ? के प्रहरीसँग घटना हुनुभन्दा अगाडि नै कुनै सुराख प्राप्त गर्ने संयन्त्र छैन ? यो विषयमा नेपाल प्रहरीका एक पूर्व डीआइजी भन्छन्, 'हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र कमजोर भइरहेको प्रमाण हो यो । सरकारले प्रतिबन्ध गरेको समूहले बारम्बार हत्याको बदला लिने बताइरहेको र नेपाल बन्दको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पनि प्रहरीले सम्भावित घटनातर्फ ध्यान नदिनु दुर्भाग्य हो ।'
नेपाल प्रहरीले परिस्थितिको विश्लेषण गरेर सम्भावित घटना घट्न रोकेको त्यति धेरै उदाहरणहरू छैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा तत्कालीन माओवादीले गरेको ६ दिने आमहड्तालका क्रममा काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूबाट लाठी बरामद गरेको थियो र त्यसलाई ठूलै प्रचार गरियो । यद्यपि शान्तिप्रक्रियामा आइसकेको माओवादीले पुनः ज्यान जाने गरेर ठूलो घटना घटाउने सम्भावना थिएन ।
जानकारहरूले गत फागुनमा भएको एनसेलको मुख्यालयमा भएको विष्फोट पनि पहिल्यै रोक्न सकिने सम्भावना रहेको बताउँछन् । त्यसयता सरकार र विप्लव समूहका बीचमा धेरै लुकाछिपी भयो । कति ठाउँमा गोली प्रहार पनि भएको थियो भने पछिल्लो समयमा विप्लवका युवासंगठनका कार्यकर्ता घिमिरेको गोली प्रहारबाट मृत्यु भएपछि विप्लव समूह उत्तेजित भएको थियो ।